RKhar M Thant
Smart Band နဲ့ Smart Watch ဘာကွာလဲ ? အတူတူပဲလား ?
ကျွန်တော်တို့ 21 ရာစုကြီးမှာ နည်းပညာတွေက ပိုမိုတိုးတက်လာခဲ့တာနဲ့အညီ လူတွေရဲ့ လူနေမှုပုံစံတွေကလည်း အရင်ကထက် တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါပြီ။ အရင်ကဆို ဈေးကွက်ထဲမှာ Ordinary Watches တွေပဲ ပေါများနေခဲ့ပြီး၊ Smart Watches တွေဆိုတာ မရှိသလောက်ရှားပါတယ်။ ရှိတဲ့ဟာတွေကလည်း …
အခုလို တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ဆန်းပြားသစ်လွင်တဲ့ နည်းပညာတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကြုံတွေ့လာခဲ့ရပါတယ်။။ ဒီထဲကမှ ကျွန်တော်တို့တွေ သေချာသတိမပြုမိပဲ တိုးတက်လာနေတဲ့ နည်းပညာတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Display Technology အကြောင်းပါ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်က SmartPhones တွေနဲ့အနေနီးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာ…
မနေ့ညကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ WWDC ( Worldwide Developers Conference) မှာ Apple အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ iOS Version အသစ်ဖြစ်တဲ့ iOS 14 ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အခု iOS 14 အသစ်မှာ ကျွန်တော်တို့…
OnePlus ဆိုတဲ့နာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့ သင့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ Premium ဆန်လွန်းပြီး Unique ဖြစ်တဲ့ Android ဖုန်းတစ်လုံးကိုမြင်မိမှာပါ။ အဲ့လိုဖြစ်ရလောက်အောင်လည်း သူ့ရဲ့ Brand ကကြော်ကြားလှပါတယ်။ နောက်ပြီး သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုက သူ့မှာဖုန်းစီးရီးတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ ဥပမာ Xiaomi မှာ…
Covid-19 လို့အမည်ပေးထားတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ကျွန်တော်လူသားတွေကို တစတစနဲ့တိုးမြှင့်ပြီးခြောက်လှန့်လာပါပြီ။ ပရိတ်သတ်တို့ သိခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလပိုင်းက MWC(Mobile World Congress) ကို Cancel ပြီးနောက်ပိုင်း မိတ်ဆက်ပွဲတွေ အကုန်လုံးဟာ အခုနောက်ဆုံး Redmi K30…
Xiaomi အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာ Redmi Note 9S ကို မနေ့က မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။Redmi Note 9S ဟာ အန္ဒိယမှာ Redmi Note9Pro နဲ့ Redmi Note…